Kuwani waa 10-ka sheeko ee ugu muhiimsan ee IOS 10 | War gadget
Shalay ayaa WWDC16 iyo sidii aan wada filaynayba Apple waxay si rasmi ah u soo bandhigtay nooc cusub oo ka mid ah nidaamkeeda hawlgalka ee IOS. Gaar ahaan nooca macruufka 10, oo aan dhihi karno soo koobid bilow ah inay isbedello yar ku hayaan gudaha, laakiin inbadan oo bannaanka ah, sidoo kale waxay na siinayaan sacab mug leh oo hawlo xiiso leh oo hubaal in kabadan hal isticmaale ay aad ugu mahadcelin doonaan.
Haddii aad seegtay bandhigga shalay ama aad rabto inaad dib u eegto iyaga, maanta waxaan ku tusinaynaa 10-ka sheeko ee ugu muhiimsan ee macruufka 10. Waa run in ay jiraan in ka badan 10, laakiin waxaan la joognay kuwa ugu muhiimsan oo ka sarreeya dhammaantood kuwa ugu badan ee ku biirin doona dhammaan kuwa isticmaala iPhone ama iPad.
1 Ka saar barnaamijyada Apple ee hooyo
Ka saar barnaamijyada Apple ee hooyo
Tani waxay ahayd mid ka mid ah codsiyada weyn ee dadka isticmaala tan iyo weligood, taas oo ugu dambeyntii run ku timid imaatinka iOS 10. Waana in dadka isticmaala badankood ilaa hada lagu qasbay inay rakibaan barnaamijyo aysan waligood isticmaalin. Isla marka macruufka 10 uu ku yimaado qaab rasmi ah, Isticmaalahan kasta wuu tirtiri karaa barnaamijyada soo socda ee asal ahaan loogu rakibay iPhone iyo iPad;
Shaashadda qufulka ayaa ka mid ahayd welwelka weyn ee isticmaalayaasha iyo midka ay inta badan ka codsadeen. Apple uma muuqan, laakiin waxay qaadatay tixgelin waxayna ku dartay horumarin cusub.
Waxaa ka mid ah awood u leh inuu dhaqaajinayo shaashadda qufulka kaliya adoo qalabka kor u qaadaya. Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan aragno ogeysiisyada adigoon riixin batoon kasta. Waqtigan xaadirka ah nooca beta ee loogu talagalay horumariyeyaasha waxaan luminay xulashooyinka qaar sida furitaanka iyada oo loo marayo koodh ama hoos loo riixayo, laakiin waxaa la filayaa in ikhtiyaarradani ay mar kale joogi doonaan nooca ugu dambeeya ee iOS 10.
Siri, kaaliyaha codka ee Apple ma keenayo astaamo badan ama horumarin badan gacanta iOS 10, laakiin waxay u furneyd dhammaan horumariyeyaasha. Tani waxay ka dhigan tahay in codsiyada dhinac saddexaad, taas oo ah, maahan Apple, ay awoodi doonaan inay adeegsadaan Siri.
Ma garanayno, ugu yaraan hadda, codsiyada ka faa'iideysan doona kaaliyaha codka Cupertino, laakiin sida aan awoodnay inaan ogaano, xitaa WhatsApp ayaa ka mid noqon kara barnaamijyadan.
Khariidadaha ayaa ka mid ah barnaamijyada ay Apple sida aadka ah uga shaqeyso si ay uga dhigto mid sii kordhaya oo la heli karo, sidoo kale isku dayaysa in la yareeyo fogaanta Khariidadaha Google Tan awgeed, imaatinka macruufka 10 waxaan arki doonaa sida ay u noqoto mid wax soo saar badan, oo na siisa Soo-jeedimaha ku saleysan goobta iyo qaab cusub oo hagitaan ah oo ina tusaya macluumaadka taraafikada.
Intaas waxaa sii dheer, iyo si loo soo koobo wixii horeyba u ahaa codsi dhammaystiran, haddii aad leedahay gaari la jaan qaadi kara, waxaad awoodi doontaa inaad hesho tilmaamaha ay ku siinayaan Khariidadaha konsol-ka gaarigaaga. Tan, uma baahnid inaad eegto iPhone-ka si isdaba-joog ah oo aad indhahaaga u hayn kartid waxa run ahaantii muhiimka ah, wadada.
Apple marka lagu daro ku dhawaaqida in Apple Music ay horey u gaadhay 15 milyan oo isticmaaleyaal bixiya, ayaa lagu dhawaaqay wararka xiisaha leh, ku dhowaad dhammaantood heer naqshad. Waxaan sidoo kale ku dhawaaqayaa waxoogaa isbeddelo ah oo ku saabsan isdhexgalka kaas oo u oggolaan doona dadka isticmaala inay u maareeyaan arjiga si fudud oo macquul ah
Haddii aad nasiib u yeelatay inaad tijaabiso iOS 10 mar hore, waxaad ogaan doontaa in codsi cusub u muuqday, Guriga. Halkaas ayaad ka xakameyn kartaa marin u helid kasta oo la jaan qaadi kara HomeKit oo aad u habayn kartaa xaaladaha, adigoo hagaajinaya aalado dhowr ah isla waqtigaas.
Siri sidoo kale wuxuu lahaan doonaa door hogaamineed taasna waxay tahay in kaaliyaha codka ee Apple aan la tacaali karno xulashooyinka kala duwan ee HomeKit.
Codsiga Noticias kuwa ku jira Cupertino ayaa sidoo kale dib u habayn cusub lagu sameeyay, si hadda loo muujiyo wararka ugu muhiimsan uguna caansan si aan cidna u dhaafin hal war oo khuseeya.
Waxa kale oo jira war kale oo wanaagsan oo ka imanaya codsigan aan ka akhrin karno hadda wixii ka dambeeya Daabacaadda National Geographic iyo habab kale oo lacag lagu bixiyo. Ugu dambeyntii, waxaan aqrin karnaa qaar ka mid ah wararka ugu muhiimsan ee laga yaabo inay ku dhacaan qaabka dalabyada.
Iyadoo la adeegsanayo IOS 10 waxaan dhihi karnaa xitaa dalabka taleefanka looma badbaadin hagaajinta iyo isbedelada. Isticmaale kastaa hadda wuu heli karaa qoraalka farriimaha codka, aqoonsiga taleefannada aadan ku keydin buugga taleefankaaga.
Intaa waxaa dheer VoIP waxay si aan kala sooc lahayn ugu baaqeysaa nooca cusub ee nidaamka hawlgalka Apple. Kaararka xiriirka sidoo kale waxaa soo maray isbadalo qaarkood si ay noo tusaan siyaabaha aan si isdaba joog ah ula xiriirno dadka aan la xiriirno.
Sawiradu waxay noqon doonaan kuwo aad u caqli badan imaatinka macruufka 10 waana taasi tusaale ahaan way lahaan doontaa garashada wajiga smart kaas oo ogaan doona wejiyada sawirradaada. Tani, tusaale ahaan, waxay si weyn nooga caawin doontaa inaan raadino sawirro uu ka muuqdo saaxiib ama xigto.
Sidoo kale, ku dayashada codsiyada kale ee noocan ah, sawirrada waxaa lagu soo ururiyey dhacdooyin, goobo ama taariikho. Apple ayaa shaqadan ugu magac dartay sida "Xusuus" waana laga heli doonaa iPhone-ka iyo iPad-ka, laakiin waa inaan sugno imaatinka rasmiga ah ee nooca ugu dambeeya ee iOS ee qalabkayaga.
Si loo xiro liiska cusub ee IOS 10 ama ugu yaraan kan ugu muhiimsan, waxaan arki doonnaa hagaajinta lagu sameeyay arjiga farriimaha. Laga soo bilaabo imaatinka nooca cusub ee macruufka waxaan yeelan doonaaHelitaanka saadaasha Emoji ama suurtagalnimada in la beddelo ereyada qaarkood, sida iPhone, oo leh terminal yar oo Apple ah, taas oo ah, emoji.
Intaas waxaa sii dheer iyo si loo soo afjaro codsigan horeyba u fiicnaa, waxaan qori karnaa farriimo qoraal dabiici ah, waxaan u diri karnaa fiidiyowyo ka ciyaara shaashadda hoose. Iyo sida waxyaabo kale oo badan, codsigan sidoo kale wuxuu u furnaan doonaa horumariye wixii hadda ka dambeeya, taas oo shaki la'aan ah war weyn.
Maxaad u maleyneysaa wararka ugu muhiimsan ee aan ku raaxeysan karno, sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan rajeynayaa, iOS 10?.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Noticias » Kuwani waa 10-ka sheeko ee ugu muhiimsan ee IOS 10
Wax kasta oo aan hayno E3 2016 illaa hadda